Mandripak'olona ny tazomoka Efa ho 50 no maty any Betroka
Tsy latsaky ny 50 isa ireo olona ireo efa matin` ny tazomoka ao anatin` ny kaominina 22 mandrafitra ny distrikan` i Betroka, hoy ny solombavamhoaka Nicolas Randrianasolo.
Ny ankizy no tena lasibatra amin` izao. Manao antso avo foana satria resaka ain` olona no resaka, hoy izy, satria ny tazomoka no tena mahafaty ary tsy misangisangy. Any ambanivohitra no tena ahitàna tranga maro, hoy hatrany ity depiote ity. Tsaboina amin` ny alalan` ny fanafody eny amin`ny farmasia sy hopitaly ny marary fa tsy misy fanafody avy amin` ny ministeran` ny fahalsamam-bahoaka tonga any an-toerana. Nilaza fa hidina any an-toerana ny ministera hitondra izay fanafody izay. Fanentanana amin` ny fanadiovana ny tontolo iainana no ataon` ireo tomponandraikitra any an-toerana eo am-piandrasana izay fanafody avy amin` ny ministera izay. Ankoatra ny any Betroka dia lasibatra koa ireo distrika maro any atsimo toa an` Bekily, Ikalamavony, Iakora, Befotaka Atsimo, Imanja…